ဇီဒန်းလည်း ကိုဗစ်တောင်ကို မကျော်နိုင်ခဲ့ပါ…. – Premier League Special
ဇီဒန်းလည်း ကိုဗစ်တောင်ကို မကျော်နိုင်ခဲ့ပါ….
January 22, 2021 La Min Article 0
ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းကတော့ နည်းပြ ဇီဒန်းတစ်ယောက် ကိုဗစ် -၁၉ ပိုးကူးစက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။
ပြင်သစ်သားရဲ့ရီးရဲလ်အသင်းနဲ့ အနာဂတ်က မသေချာတဲ့အနေအထားမှာရှိနေပြီး လက်ရှိအချိန်မှာတော့ ကိုဗစ်ကြောင့် သီးသန့်ခွဲနေရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဇီဒန်းဟာ ကိုပါဒယ်လ်ရေးမှာ အယ်လ်ကိုယာနိုအသင်းကို အရေးနိမ့်ပြီးနောက် ဖိအားတွေပိုများပြားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဇီဒန်းကို ရီးရဲလ်အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေက ထောက်ခံထားဆဲဖြစ်ပြီး စနေနေ့မှာတော့ ရီးရဲလ်ဟာ အလာဗက်စ်အသင်းနဲ့ ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
“ဇီဒန်းတစ်ယောက် ကိုဗစ်ပိုးကူးစက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ အခုတော့ သူ့ကို သီးသန့်ခွဲထားပါပြီ”လို့ ရီးရဲလ်အသင်းက ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ သတင်းတွေအရ ရီးရဲလ်အသင်းနည်းပြ ဇီဒန်းဟာ အယ်လ်ကိုယာနိုအသင်းနဲ့ပွဲမှာ ကိုဗစ်ပိုးကူးစက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ရီးရဲလ်အသင်းဟာ တိုက်စစ်မှူး လူကာဂျိုဗစ်ကလည်း ကိုဗစ်ပိုးကူးစက်ခံခဲ့ရသေးသလို ဟာဇက် ၊ ကက်စ်မဲရိုး ၊ မီလီတာအိုတို့လည်း ကိုဗစ်ပိုးကူးစက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ ရီးရဲလ်အသင်းရဲ့လာမယ့်အပတ်ပွဲစဉ်တွေကို လက်ထောက်နည်းပြ ဘက်တိုနီက ဆက်လက်တာဝန်ယူကိုင်တွယ်ဖွယ်ရှိနေပါတယ်။
ရီးရဲလ်အသင်းဟာ စူပါဖလား နဲ့ ကိုပါဒယ်ရေးဖလားတွေမှာပါ နိုင်ပွဲပျောက်ခဲ့တာကြောင့် ၃ ပွဲအထိ နိုင်ပွဲပျောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဇီဒန်းရဲ့ရီးရဲလ်အသင်းဟာ ထိပ်ဆုံးနေရာက တီကိုအသင်း ၇ မှတ်အကွာအနေအထားရှိနေပြီး ချန်ပီယံပြေးလမ်းကြောင်းပေါ်မှာတော့ ရှိနေသေးတာဖြစ်ပါတယ်။
ဇီဒန္းလည္း ကိုဗစ္ေတာင္ကို မေက်ာ္ႏိုင္ခဲ့ပါ….
ရီးရဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းကေတာ့ နည္းျပ ဇီဒန္းတစ္ေယာက္ ကိုဗစ္ -၁၉ ပိုးကူးစက္ခံခဲ့ရတယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။ ျပင္သစ္သားရဲ႕ရီးရဲလ္အသင္းနဲ႔ အနာဂတ္က မေသခ်ာတဲ့အေနအထားမွာရွိေနျပီး လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ ကိုဗစ္ေၾကာင့္ သီးသန္႔ခြဲေနရေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဇီဒန္းဟာ ကိုပါဒယ္လ္ေရးမွာ အယ္လ္ကိုယာႏုိအသင္းကို အေရးနိမ့္ျပီးေနာက္ ဖိအားေတြပိုမ်ားျပားလာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဇီဒန္းကို ရီးရဲလ္အသင္းတာ၀န္ရွိသူေတြက ေထာက္ခံထားဆဲျဖစ္ျပီး စေနေန႔မွာေတာ့ ရီးရဲလ္ဟာ အလာဗက္စ္အသင္းနဲ႔ ရင္ဆုိင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
“ဇီဒန္းတစ္ေယာက္ ကိုဗစ္ပိုးကူးစက္ခံခဲ့ရပါတယ္။ အခုေတာ့ သူ႕ကို သီးသန္႔ခြဲထားပါျပီ”လို႔ ရီးရဲလ္အသင္းက ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ သတင္းေတြအရ ရီးရဲလ္အသင္းနည္းျပ ဇီဒန္းဟာ အယ္လ္ကိုယာႏိုအသင္းနဲ႔ပြဲမွာ ကိုဗစ္ပိုးကူးစက္ခံခဲ့ရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ရီးရဲလ္အသင္းဟာ တိုက္စစ္မွဴး လူကာဂ်ိဳဗစ္ကလည္း ကိုဗစ္ပိုးကူးစက္ခံခဲ့ရေသးသလို ဟာဇက္ ၊ ကက္စ္မဲရိုး ၊ မီလီတာအိုတုိ႔လည္း ကိုဗစ္ပိုးကူးစက္ခံခဲ့ရပါတယ္။ ရီးရဲလ္အသင္းရဲ႕လာမယ့္အပတ္ပြဲစဥ္ေတြကို လက္ေထာက္နည္းျပ ဘက္တိုနီက ဆက္လက္တာ၀န္ယူကိုင္တြယ္ဖြယ္ရွိေနပါတယ္။
ရီးရဲလ္အသင္းဟာ စူပါဖလား နဲ႔ ကိုပါဒယ္ေရးဖလားေတြမွာပါ ႏုိင္ပြဲေပ်ာက္ခဲ့တာေၾကာင့္ ၃ ပြဲအထိ ႏုိင္ပြဲေပ်ာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဇီဒန္းရဲ႕ရီးရဲလ္အသင္းဟာ ထိပ္ဆံုးေနရာက တီကုိအသင္း ၇ မွတ္အကြာအေနအထားရွိေနျပီး ခ်န္ပီယံေျပးလမ္းေၾကာင္းေပၚမွာေတာ့ ရွိေနေသးတာျဖစ္ပါတယ္။
ဘရိုက်တန်ဂိုးသမား မက် ရိုင်ယန်ကို အငှားနဲ့ ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ အာဆင်နယ်
ပရီးမီးယားလိဂ် ချန်ပီယံဆုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ယူနိုက်တက်ကို ထောက်ခံခဲ့တဲ့ ဝိန်းရွန်းနီ